The Oromo people are suffering immensely under the evil regime of TPLF. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsThe Oromo people are suffering immensely under the evil regime of TPLF.
The Oromo people are suffering immensely under the evil regime of TPLF.
The Oromo people are suffering immensely under the evil regime of TPLF. The cause of their suffering is the greediness and envy for this minority regime of the Oromo natural resources.
Video kana daawwadhe imimmaan qabachuu dadhabe.
* 103 in the Middle East and Africa
2013 = $13.5 billion.
Qondaalonni TPLF fi ummanni isaanii waan tokko irratti walii galaniiru. Aangoo siyaasaa warra kaan harkatti qabuu dhiisuudhaan furtuu dinagdee qofarratti ciniinanii hafuu. Dinagdee sana ammoo qawwee ittiin tikfatan jabeeffachuu. Baankii fi taankii! Wanni argaa jirrus kanuma. Kasaaraa biyyattii itti dhidhimaa jirtuun jarri duroomaa jiru. Beela ummanni biyyattii itti deemaa jiruun jarri quufaaf haala aanjeffataniiru. Gufuun hamaan kun hanga hin buqqaanetti hoggansi siyaasaa qofti milkaahuu hin danda’u. Sirni cehumsa gara demokraasiis dubbii safaaxaatti millkaahu hin se’inaa. Ammallee fuuldurri keenya tabba. Abdii wal kutachiisuuf osoo hin taane dhugaadhuma jirutu kanuma. Gariin namaa akka waan wanti hunduu dhumatetti, buburraaquu eegaleera waan taheef dhugaa kana wal yaadachiisuun dirqama.
Abdi Illey’s liyu police firing live bullet on peaceful protesters in Qabri dahar
OMN: Sagantaa obbo Baqqalaa D.C tti qabu Ilaalchisee (LIVE) Caamsaa 11, 2018